जापान ला’न्छु भन्दै लाखौ अ’सुल्ने कमला प’क्राउ, पत्रकार माथी पटकपटक हा’तपा’त ! – Namaste Host
March 13, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जापान ला’न्छु भन्दै लाखौ अ’सुल्ने कमला प’क्राउ, पत्रकार माथी पटकपटक हा’तपा’त !
काठमाडौँ , नेपालमा रोजगारीको राम्रो अवसर न’पाएका हजारौ नेपालीहरुको ग’न्तब्य हो बैदेशिक रोजगार ।देशमा भने जस्तो जागिर नपाए पछि बिदेशिन बा’ध्य छन् हजारौ नेपाली । बैदेशिक रोजगारको नाममा ठ’गि गर्ने र झु’क्काउने शृं’खला नया भने हैन ।जापान पठाउने भन्दै ठ’गि गर्ने कमला भण्डारी नाम ग’रेकी एक महिला पक्राउ परेकी छन् ।
उनले ३/४ लाख रुपैया लिएर जापान पठाउने गरेको ब’ताईएको छ ।गोल्ड टिभी नामक युटुब च्यानलको स’क्रियताम उनि कमला भण्डारी स’मातिएकी छन् ।उनले पि’डित हरुलाई बा’रम्बार थ’र्काउने र झु’क्काउने गर्दै आएकी थिइन ।उनले पत्रकार माथि समेत पटक पटक हा’तपा’त गरेकी थिइन । थप भिडियोमा हेर्नुहोस ।
यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सु’रक्षा मन्त्रालयले ‘क’ल सेन्टर’ संचालनमा ल्याएको छ। बैदेशिक रोजगार बोर्ड स’चिवालयको ब्य’वस्थापनमा सञ्चालनमा आएको क’ल से’न्टरमा विशेषत वैदेशिक रो’जगारीमा हुने गरेका ठ’गी तथा गु’नासाहरु टि’पाउन सकिनेछ। साथै आफ्ना गु’ना’सा तथा स’मस्या स’म्वोधन भए नभएका बारेमा जानकारी पाउन सकिनेछ।
बैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठ’गीमा परेका, बिदेशमा अ’लप’त्र परेका वा स्वास्थ्य स’म’स्याबाट पी’डि’त भई घर फ’र्किन चा’हनेले वा तिनका परिवारले नि’शुल्क कल सेन्टरमा सम्पर्क गरि स’हायताका लागि अनुरोध गर्न सक्ने छन्। त्यस्तै विदेशमा कुनै कारणले मृ’त्यु भएमा उनीहरुको श’व ल्या’उन वा सहायताका लागि आ’ग्रह गर्न सक्नेछन्।
झु’टा मु’द्दामा परि जे’ल स’जा’य भो’गिरहेका का’मदारले पनि स’हायता लिनसक्ने छन्। कल से’न्टरमार्फत गु’ना’सा तथा स’मस्याहरु मन्त्रालय र स’म्बद्ध नि’कायसम्म पुग्नेछन्। ति गु’नासा तथा स’मस्या स’म्वोधनका लागि भइरहेका प्र’यास र स’माधान भए नभएको बारे पनि सूच’ना लिन सकिनेछ।
कल से’न्टर मार्फत बैदेशिक रोजगार बि’भाग, बै’देशिक रोजगार बो’र्डको स’चिवालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सु’रक्षा को’ष र मन्त्रालय मा’तहतका अन्य नि’कायबाट भइरहेका काम का’रवाहीबारे जि’ज्ञासा रा’ख्नेलाई जानकारी दिइने मन्त्रालयले ज’नाएको छ।
तत्काल वृद्धभत्ता ४ हजार पुर्याउने ओलीको घोषणा !
एकै घरका ४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, वडाध्यक्ष भन्छन् : गाउँ नै सखाप होला जस्तो भो
May 15, 2021 Bijay Lama
June 5, 2021 Bijay Lama